Diyaaradaha dagaalka xulufada Sucuudiga oo caruur ku laayey Yemen - BBC News Somali
Image caption Caruur dhaawac ah
Tobannaan dhalaan ah ayaa lagu dilay oo lagu dhaawacay weerarro duqayn ah oo lala beegsaday bas dusgsi [oo ay ardayi saarreeyeen] isagoo marayey magaalo ku taal dhanka woqooyi ee fallaagadu gacanta ku hayaan.
Xogo la helay ayaa sheegaya in baabuurkaa ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee huwanta Sucuudigu hogaaminayo ee taageeraya xukuumadda Yemen ee dagaalka kula jirta fallaagada Xuutiyiinta.
Hay'adda Laanqayrta Cas ayaa sheegtay in ugu yaraan sagaal iyo labaatan caruur ahi dhinteen.
Xulufada weerarka geysatay ayaa sheegtay in ay beegsanayeen mitidiin ay sheegtay in ay dhibaateeyaan rayidka, isla markaana ahaayeen weerarro lagaga falcelinayey gantaallo lagu weeraray koonfurta Sucuudiga oo hal qof ku dhintay.
Dhanka kale Isbitaalada magaalada Xudayda ayaa waxa ay maalmo ka hor codsanayaan deeq dhiig oo deg-deg ah. Hay'adda caalamiga ah ee Bisha Cas ayaa sheegtay in ay isbtilaalada u direeyso qalabka qalniinka si loo daweeyo 50 qof oo dhaawac culus ka soo gaartay duqeynta.
Suuqa kaluunka ayaa aad ugu dhaw afka hore ee badda Xudayda. Intii uu socday dagaalka yemen Dekadda ayaa noqotay furin dagaal.
Lix toddobaad ka hor, xuladafda uu sacuudiga hoaamiyo ayaa dagaal culus ku qaaday dagaalyanada xutiyiinta eek u sugan magaalada Xudayda si ay gabi ahaanba uga nadiifiyaan magaalada.
Hay'adaha deeqbiyeyaasha ayaa ka digay in khash-khaad kasta oo ka dhaca magaalada dekedda ah ee Xudayda uu nolosha malaayin qof oo reer yemen ah cariiri galinayo.